तस्विर कसरी आफै बोल्छ ? विचार कसरी बन्छ ? - उज्यालो पाटो
यो लकडाउनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरु पहिले भन्दा बढि सक्रिय छन् । सक्रिय नहुनुको विकल्प नभएको होइन तर सामाजिक सञ्जाल जति सरल र सहज अरु विकल्पहरु छैनन् । पुस्तक पढ्नु वा अरु रचनात्मक कुराहरु गर्नु सबैका लागि रोमाञ्चक नहुन सक्छ तर सामाजिक सञ्जाल सबैका लागि नै सहज, सरल र रोमाञ्चक छ । अझ यसमा आउँने फोटो तथा भिडियोहरुले हामीलाई बौद्धिक र विचार व्यक्त गर्ने खुराक र अवसर दिन्छन् ।
जस्तै यो तलको फोटो हेर्नुहोस् । यो फोटो अहिले लकडाउनको बेलाको नमुना फोटो हो । यो हिजो देखि मेरो फेसबुकको टाइमलाइनमा धेरै पल्ट देखिएको छ । धेरै मानिसहरुले पुलिसको ज्यादतीको बिरोध गरेका छन् तर त्यसरी बिरोध गर्नेहरु धेरैले लेखेका छन् कि यो फोटो कहाँको हो थाहा छैन तर पुलिसको काम निन्दनिय छ ।
यो फोटोको वास्तविकता के हो भन्नु पुर्व एक पल्ट ध्यान दिएर तस्विर हेर्नुहोला ।
अब फोटो खिच्नु अगाडीको पृष्ठभुमिका बारेमा कुरा गरौँ ।
१. यो मान्छे त्यसै बाइकमा हुँइकिरहेको थियो । पुलिसले रोक्यो र नजिकैको घरबाट भरि सिलिन्डर ल्याएर सजाय स्वरुप आधा घण्टा बोकेर बस्न भन्यो । यो त्यहि बेलाको तस्विर हो ।
२. यो मान्छे घरमा सिलिन्डर सकिएर खाना पकाउँने उपाय नलागे पछि सिलिन्डर साट्न बाइकमा विस्तारै पसल हेर्दै जाँदै गर्दा नयाँ ठाउँमा पुग्यो । त्यहाँका स्थानिय युवाहरुले नयाँ मान्छेको प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । उसलाई आफैले ल्याएको सिलिन्डर बोकाएर रोड ब्लक गराएर राखे । पुलिसले आएर छुटायो । यो त्यहि बेलाको तस्विर हो ।
३. यो मान्छे घरमा सिलिन्डर सकिएर खाना पकाउँने उपाय नलागे पछि सिलिन्डर साट्न बाइकमा विस्तारै जाँदै थियो । पुलिसले देख्यो र केहि सोध्दै नसोधी यस्तो सजाय दियो । यो त्यहि बेलाको तस्विर हो ।
हरेक नम्बर अनुसार विचारहरु फरक फरक हुन्छन् । पहिलो नम्बरमा केटाकै गल्ति देखिन्छ र केटालाई बेस्मारी गाली गरिएला तर दोस्रो अवस्था भए केटाको दोष छैन र पुलिस धन्यवादको पात्र छ । तेस्रोमा पुलिसलाई गाली गरिएला । हरेक सन्दर्भमा हाम्रा विचारहरु फरक फरक हुन पुग्छ । हामी कुन सन्दर्भ रोज्छौँ भन्ने कुरा तस्विर आफैले निर्धारण गर्दैन । अर्थात, तस्विर बोल्दैन । तस्विर बोलाउँने हामीले नै हो । बरु कसरी तस्विर बोलाउँने भन्नेमा हाम्रो सत्य वा जानकारीले असर पार्छ । त्यसमाथि हाम्रो आग्रह वा पुर्वाग्रह थपियो भने त तस्विरले बोल्ने भन्दा विपरित हाम्रो विचार बन्न सक्छ । वास्तविक कुरा के हो भन्नेमा हामीलाई त्यो घटनाक्रमको सम्पुर्ण जानकारी चाहिन्छ । फोटो मात्रै हेरेर बन्ने धारणामा हाम्रो अहिलेको अवस्था, पुलिसको विगत आदिले पनि उत्प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ ।
यसरी तस्विर वा समाचार हेरेर विचार व्यक्त गर्दा धेरै पल्ट गलत निर्णयमा पुगिन्छ । म पनि धेरै पल्ट पुगेको छु । त्यस्तोमा निर्णय बदल्नु आफ्नो कमजोरी सोच्न हुन्न । विचार बन्ने प्रक्रिया नै यसरी हो । त्यसो भए सत्य के हो त ? हामीले विचार बनाउँने कति बेला हो त ? प्रश्न जटिल बन्छ ।
एब्स्ट्रयाक चिन्तन : प्याज पुस्तकको कुनै निबन्धको कुनै प्रसंगमा निबन्धकार शंकर लामिछानेले भनेका छन्, “सत्य त्यहि हो, जे तिमीलाई थाहा छ ।” उनले सत्यलाई एकदमै सरलरुपमा भनेका हुन् । साँच्चै नै सत्य त्यति नै हो, जति तपाईलाई थाहा छ । त्यस्तै, अर्कोलाई तपाई भन्दा बढि वा कम थाहा छ भने उसका लागि सत्य तपाईको भन्दा फरक हुन सक्छ । सत्यको एउटा मात्रै रुप हुन्न । अन्तिम सत्य हुदैन र सत्य ठोस हुदैन । सत्य पानी जस्तो तरल हुन्छ । फेरिन्छ । थाहा हुदै गए पछि सत्य पनि फेरिदै जान्छन् । सत्यको यो तरलता नै सत्यको विशेषता हो ।
यसो भन्दैमा तपाईले सत्य थाहा पाउँन स्वअनुभव र स्वज्ञान हुनै पर्छ त भन्न सक्नु हुन्छ । आफुले थाहा पाएका मात्रै कुरा पत्याउँछु, अर्थोक पत्याउँदिन भनेर स्वअनुभव र ज्ञान खोज्ने एक व्यक्तिको कथामा फिल्म बनेको छ, आँखो देखा । गजबको फिल्म छ । त्यसमा एउटा पात्र छ जसले म अब देखि आफुले नदेखेका र महसुस नगरेका कुरामा विश्वास गर्दिन भन्ने अड्डी कस्छ । अब उसलाई सबै कुरा आफैले देखेर थाहा पाउँनु पर्छ । मरुभुमी तातो हुन्छ भन्ने पनि देखेर र भोगेर मात्रै थाहा हुने भो । भैसीले हान्दा दुख्छ भन्ने थाहा पाउँन पनि भैसीले आफुलाई हानेकै हुनु पर्ने भो ।
तर आजको यो युगमा यसरी सत्य थाहा पाउँन सम्भव होला र ? उहिलैको समाज जस्तो सानो क्षेत्रमा हामी खुम्चिएका छैनौँ । उहिलेको मान्छे अलिकति चलाख वा उत्सुक थियो भने उसले जीवन, जगत, राजनीति, अर्थशास्त्र, भुगोल लगायतका धेरै कुराहरुको पुर्ण ज्ञान लिन सक्थ्यो । उहि मान्छेलाई आफ्नो क्षेत्रको नक्सा बनाउँन सक्ने, कुन फलको के औषधी हुन्छ भन्ने थाहा पाउँने र कुन फल खानु हुदैन भन्ने चिन्ने लगायतका सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो सम्भव छैन । अध्ययनको तह यति सुक्ष्म र यति वृहत छ कि अहिलेको कुनै एक बिषयको ज्ञान त एकै मानिसले राख्न सक्दैन भने अहिले बिषय नै बगरमा बालुवाको गन्ति झै पुगिसके । पहिले एउटा गाउँमा च्याउ २० थरीका हुन्थे भने कसैले हेरेर सजिलै भन्दिन्थ्यो कि कुन च्याउ खान हुन्छ र कुन हुदैन । तर अहिले हामीलाई थाहा छ कि ५० हजार प्रकारका च्याउ छन् र त्यस मध्ये निकै हजार प्रकारका च्याउहरु खाएमा मरिन्छ । यसले हामीलाई कुन च्याउ खाने कि नखाने भन्नेमा बढि सजग बनाउँछ । त्यसमाथि बर्षेनी च्याउ खाएर मर्नेहरुको समाचार जुन हाम्रो गाउँ भन्दा कोसौँ पर हुन्छन्, तर तिनले पनि झस्क्याउँछन् । यो ज्ञानको अफ्ठ्यारो पनि हो । यस्तोमा सबै आफै भोग्छु भन्न सम्भव नै छैन । च्याउ त ५० हजार भन्दा बढि प्रकारका रहेछन् । अरु कति होलान् ।
के गर्ने त ? सत्य त्यस्तो अफ्ठ्यारो छ त ? सत्य आज पनि दुर्लभ छ तर विकट छैन । यसका लागि हामीले आधिकारिक स्रोतलाई विश्वास गर्नै पर्छ । धेरै जसो अवस्थामा त एक भन्दा बढि आधिकारिक स्रोत हेरेर मात्रै सत्य थाहा पाउँन सकिन्छ । यसले आफुले नै भोग्ने अफ्ठ्यारोबाट हामीलाई अलिक होलो बनाउँछ ।
र, सबै भन्दा मुख्य कुरा । मैले थाहा पाएको वा मेरो सत्य नै अन्तिम सत्य हो भन्ने अडानमा बस्नु भएन । कुनै सन्दर्भ वा जानकारी विशेष बनाएका विचारहरु परिवर्तन गर्न लचिलो बन्न पर्यो । आग्रह र पुर्वाग्रहले छुनु भएन । मान्छेका लागि विचारहरु हुन्, विचारका लागि मान्छे होइन । आफ्नो विचार राख्दै गर्दा विचार फरक परेकै भरमा विरोधी चित्रित गर्नु भएन । फरक विचार हुनु भनेको शत्रू हुनु होइन । विचार प्रति व्यंग्य वा आक्रामक हुन पाइयो तर त्यसले विचार राख्ने व्यक्तिको मर्यादा, सम्मान र स्वतन्त्रतामा दखल पुग्नु भएन ।